Fitaovana ilainao ampiasaina amin’ny onjampeo #1: Fanoratana ‘Script’ ho an’ny onjampeo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 18:29 GMT
Atrikasa momba ny onjampeo. Sary: MediaHelpingMedia
Tamin'ny volana Febroary lasa teo, nandritra ny andro Iraisam-pirenena ho an'ny Onjampeo, ny mpikambana malalanay, Aparna nanontany hoe ahoana no fandehan'ny tetikasa GV Radio ao. Novaliako izy hoe “Fomba fahandro malefaka no iketrehana ny tetikasa GV Radio, mba hahazoana ireo tsiro mafilotra indrindra. Mamelà anay hilaza fa eo am-panomanana sakafo tsara sy mafilotra izahay [Vindaloo]!, hoy aho taminy!”
Eny, manomboka maka endrika ny “vindaloo”! Ary mba hanatsaranay hatrany, mila ny fanampianareo rehetra izahay! Ndeha isika hifanampy, raikitra ve?
Efa nahare mikasika ny Media Helping Media (MHM) ve ianao?
Ny Media Helping Media (MHM) dia vovonana iray an-tambajotra fanofanana maimaimpoana momba ny asa fanaovan-gazety, miaraka amin'ireo fitaovana fototra mba hanampiana anao amin'ny fiaingàna. Manana fantina fanolorana tena ilaina ihany koa izy mba hanampiana anao amin'ny famoronana script radio tsotra na torolàlana fikiràna feo, ankoatra ireo fitaovana hafa mahaliana.
Ndeha hatombontsika amin'ireo tena fototra. Mialohan'ny hanombohana fandaharana amin'ny onjampeo, tsy maintsy manao drafitra iray ianao ary manontany hoe karazana fandaharana toa inona no tianao ho vokarina. Na izany aza, ny karazana fandaharana izay vokarinao dia tsy maintsy mila ‘script’.
Topazo maso ity fampisehoana “Fanoratana Script an'ny Onjampeo” ity, nataon'i David Brewer, mpanorina ny MHM, mety hanampy anao izy amin'ny fanombohana!
Ao anatin'ity fampisehoana ity, hianaranao ireo zotra fototra mba hamoronana script iray ho an'ny fandaharana amin'ny onjampeo:
Fanoratana script onjampeo iray avy amin'i David Brewer
Raha toa ianao manana fanontaniana, fanehoankevitra na maniry hametraka zavatra tsara mba hanampiana ny GV Radio an'ny vondrom-piarahamoninay, hampiroborobo ireo traikefany amin'ny onjampeo, mametraha fanehoankevitra iray na mandefasa imailaka iray azafady:)